Tambanudza Tafura Inovhara Fekitori | China Kutambanudza Tafura Inovhara Vagadziri uye Vatengesi
Tambanudza Tafura Inovhara Kudzoka neZipper
Iyo yakanakisa spandex tafura yegirazi inoratidzira yakazara neyakavhara zipi, ichikubatsira iwe mukugona kwekuwedzera imwe nzvimbo yekuchengetera pasi. Kana iwe uchinetseka nezvekuchengetedzwa pazviratidziro kana nzvimbo dzakazara, ipapo tafura yespandex inovhara neshure zipi inokurudzirwa kuve sarudzo iri nani sezvo uchigona kukiya zvinhu zvako zvakakosha mukati.
Round Kutambanudza Tafura Inovhara
Yakagadzirwa yemhando machira epolyester machira muhupamhi hwakasiyana-siyana hwemavara, kutenderera kutambanudza tafura inovhara inowedzera inokwezva, yehunyanzvi chitarisiko kune echiitiko matafura uchipa yakanakisa nzvimbo yekusimudzira bhizinesi rako netsika yekudhinda iyo inoratidza yako logo kana kushambadzira meseji kuti ugadzire yakawedzera kukanganisa kune yako dumba.
Tambanudza Yakagadziriswa Tafura Inovhara
Rudzi urwu rwe spandex tafura yekuvhavha yakanakira zviitiko zvakasarudzika, magungano, ekuratidzira ekutengesa, dzimba dzakashama, fairs uye kunyangwe mhemberero dzevanhu. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro yakasununguka micheka yepolyester mumhando dzakasiyana dzemavara, yakatambanudza yekutengesa tafura tafura inowedzera inokwezva, kutaridzika kwehunyanzvi kumatafura ako ayo anogona kuratidza logo yako kana kushambadzira mameseji kuti ugadzire kuwedzera kune yako dumba.